Xildhibaan Warsame: Booliiska Hirshabelle Loo Tababaray Amniga Waxbadan Ayeey Ka Qaban Doonaan – Goobjoog News
Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa rajo aad u wanaagsan ka muujiyey in isbedal amni ay sameeyaan ciidamo Booliis ah oo dhowaan tababar loo soo xiray.
Xildhibaan C/rashiid C/xakiin Warsame oo ka mid ah xildhibaannadan ayaa isaga oo u waramay Goobjoog waxa uu sheegay in rajada ay qabaan ay tahay in ciidankaan ay amni darrada ka jirta deegaannada maamulkaasi ka arrimiyo wax ka qabtaan.
Wuxuu sheegay in sidoo kale dhowaan tababar lasiin doono ciidamo kale oo maamulka Hirshabelle ah, kuwaasi oo amniga sugi doona.
“Waxaan u aragnaa tallaabo horey loo qaaday, waana ku faraxsannahay, ciidamadan la tababaray, waa ciidamadii ugu horreeyey oo Booliis ah loona tababaro Hirshabelle, waxaana ay ka kooban yihiin Labada gobol, kuwo kale oo tababar loogu furi doono B/weyne ayaa xiga, wax badan ayeey qaban karaan” ayuu yiri xildhibaanka.
Dhanka kale xildhibaan C/rashiid oo ka hadlay mushaarka ciidaman la siin doono ayaa sheegay in Qaramada Midoobay, dowladda dhexe iyo maamulkooda iska kaashan doonaan.
“Wuxu waa bilow waadna garan gartaa sida ay Hirshabelle u weyn tahay, baahida ammaan aan hadda qabno kuma filnaan karaan laakiin waa wax bilow ah, UN waxbay siin doonaan, kolba maamulkana waa qasab inuu kabo oo wixii uu heli karo ku kabo” ayuu yiri xildhibaanka.
200 oo ka mid ah ciidamada Booliiska Hirshabelle ayaa dhowaan waxaa tababar loogu soo xiray magaalada Jowhar ee gobolka Shabellaha Dhexe, waxaana la filayaa in kuwo kale dhowaan tababar looga furo magaalada B/weyne.